Drs. yusur Abraar oo noqotay masuulkii u horeeyay Taariikhda Somaliya ee xilsare oo loo dhiibay iska casisha – The official Somali Historical
Gudoomiyahii Bankiga dhexe ee Somalia Yussur A. Faarax Abraar ayaa shaaca ka qaaday inay iska casishay xilka Bankiga kadib markii ay nafta siin weysay cadaadis ay sheegtay inay kala kulantay
Madaxweynaha Somalia Hassan Garguurte iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada.
Sababta soo dedejisay Iscasilaada gudoomiyaha Baanka dhexe ayaa la noo xaqiijiyay inay tahay lacag dawlada Somalia u taal bangiyada caalamka oo madaxweyenaha iyo xulufadiisu ka codsadeen inay u saxeexdo nin ganacsade ah, Arinkaas oo ay gaashaanka u daruurtay Dr Yusur Abraar .
Kadibna ku kalliftay inay xilka isaga tegto. Yussur Abrar oo ah aqoonyahanad wax ku baratay dalka Mareykanka una dhalatay gobolka Awdal oo xilka gudoomiyenimo haysay muddo 7 usbuuc ah, ayaa sheegtay inay xaalad amaan darteed Muqdisho iskugu casili weysay balse go-aankeeda fulisay markii ay Dubai gaartay.
Yusur waxay xilka kala wareegtay AqoonyahanCabdisalaan Omar Hadliye oo ay Yusur isku beel ahaayeen, kaasoo laftiisu u adkeysan waayay waxa meesha ka socda. Beesha Gadabuursi ayaa lagu tilmaamaa dad wadaniyiin ah oo daacadnimadu ku badantahay.
Laakiin aan la noolayn dadkii la fahmayay. Waxana la sheegaa inay yihiin dadkii dhisay ama dhidibada u taagay maamulka Somaliland-ta ee maanta aanay waxba ku haynin, sabatuna ay tahay daacadnimadooda.
Soomaaliya Xajkii maaha, Daacadnimada caynkan ahna wakhtigeedii lama joogo, waxa loo baahanyhay in somalida lala qasto oo dadka wax lala cuno si degaanada aad kasoo jeedo iyo dadka ku dhaqan aad wax ugu qabato,, dheesha iyo qoob ka cayaarkana lala qabsado.
Iskusoo Wada xooriyoo Yusur Waxay buugga taariikhda Somaliya ku gashay Qofkii ugu horeeyay ee iska casila xilsare oo loo magacaabay iyadoo u tudheysa damiirkuna siinwaayay inay khiyaanto dadkeeda iyo dalkeeda taagta daran ee colaadaha iyo gaajada la ildaran
Waxan maanta halkan kusoo qaadanaynaa gabaygii Abwaan reer Awdal ah oo la odhan jiray Cali Tadhase oo 1984-kii uu Abwaan Xasan sheekh Muumin kula kulmay MAGAALA CAD.
Gabaygiisa wuxu kaga hadlayaa hab-dhaqanka reeraha Soomaalida ah. Mar uu sifeynayay beeshiisa ama beesha Gadabuursi wuxu yiri ” Daacadi ninkeedii dishaye daawo Gadabuursi”
Previous: Maxaad ka taqaan Taariikhda Muuse Ganjab iyo Yusur Abraar.
Next: General Salaad Gabeyre Iyo Siyaad Barre